भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा जेठानले ज्वाइँलाई हराए | DNFMEDIA
काजुलाई ड्राइफुडको राजा भनिन्छ । काजु खादा हुन्छन् यस्ता चकित पार्ने फाइदा हरू…
काठमाडौंको बालुवाटारमा शनिबार बेच्न राखिएको मकै र गाडा नगर प्रहरीले लगेपछि (बायाँ) निराश चेतेन्द्र–सीता दम्पती!!
इण्डियन आइडल अभिनेता गायक प्रशान्त तामाङ बुवा बन्दै, दुई कारणले यतिबेला उत्साहित छन् ।
लायन्स क्लब अफ काठमाण्डौ नयाबजार द्धारा बृक्षरोपण तथा भोजन सेवा कार्यक्रम सम्पन्न
चारैतिर विवाद पछि फेरि गायन क्षेत्रमा फर्केकी छिन गायिका समीक्षा अधिकारी,पहिलाको जस्तै क्रेज फर्केला त ?
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सुर्यास्त पछी कहिलेै गर्नुहुदैन यी काम ,नत्र अशुभ हुन्छ।
मरेको श्रीमतिको लाससङ्ग लगनगाठो गरेपछी श्रीमानले छाति पिटदै रोएको दृश्यले…..
हेटौँडा-काठमाडौँ जोड्ने सिस्नेरी सडकखण्ड अवरुद्ध…..
अनिताको स्वास्थमा निकै नै सुधार आएको छ । यसरी आफै फलफुल खादै मजाले खेल खेल्दै मान्छे पनि चिन्छिन्।
भाइरल अस्मिता जुरेलीमाथि दुर्व्यवहार, अपरिचित पुरुषले हिलोमा पछारेपछि विवाद…
भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको प्रमुखमा जेठानले ज्वाइँलाई हराएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका जेठान सुरेन्द्र श्रेष्ठले एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका बहिनी ज्वाइँ मदनसुन्दर श्रेष्ठलाई ४०६३ मतान्तरले हराएका हुन् ।
प्रमुख निर्वाचित सुरेन्द्रले १५ हजार ९८ मत ल्याएका छन् । पराजित निवर्तमान प्रमुख मदनसुन्दरले ११ हजार ३५ मत ल्याए । उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विजयकृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको चुनावी तालमेलमा विजयी माओवादी केन्द्रका विजयकृष्णले १२ हजार १०२ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी उत्तरा नेपालले ८९६३ मत ल्याइन् ।
नौवटा वडा रहेको मध्यपुर थिमिमा बहुमत ६ वटा जितेको छ । उसले वडा नं १, २, ३, ५, ६ र ९ वडामा अध्यक्ष जितेको हो । जसअनुसार १ मा बाबसकाजी डंगोल, २ मा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, ३ मा कृष्णहरि आचार्य, ५ मा बालकृष्ण श्रेष्ठ, ६ मा ज्ञानदास प्रजापति र ९ मा सानु राजबाहक रहेका छन् ।
एमालेले ४ र ७ वडा जित्दा वडा नं ८ मा नेमकिपाले जितेको छ । एमालेबाट ४ मा बालकृष्ण पात्या श्रेष्ठ र ७ वडामा कृष्णकुमार प्रजापति निर्वाचित भए । प्रजापति अघिल्लोपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका थिए । ८ वडामा नेमकिपाबाट रमेश थापा श्रेष्ठ विजयी भए ।
Previous: धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका मेयरमा एकीकृत समाजवादीको विजयी
Next: मेलम्चीमा भत्कियो एमालेको गढ, कांग्रेसले जित्यो मेयर
२०७९ असार १९ गते, आईतवार
२०७९ असार १८ गते, शनिबार
२०७९ असार १७ गते, शुक्रबार